Funda indlela yokudibanisa "Réunir" (ukuhlangana kwakhona) ngesiFrentshi
Funda Ukuqhawula okulula kwi "Réunir" (ukuya ku-Reunite)
Isifundo saseFransi ekuHlanganiseni isenzi rhoqo
Ekuqalekeni, ungacinga ukuba isenzi sesiFrentshi se- reunir sinento ethi "ukuhlangana" kwaye ukuzingela kwakho kuya kuchaneka. Ngokomsebenzi, kuthetha "ukuhlangana kwakhona" kunye nokudibanisa kuyadingeka ukuba kufike kwixesha langoku, elidlulileyo okanye elizayo. Esi sifundo sigxile kwiifom eziqhelekileyo nezifanelekileyo ze- réunir ukuze uqale ukuwusebenzisa kwiingxoxo zesiFrentshi.
Iingqungquthela ezisisiseko zeReunir
I-Réunir iyisoloko isenzi- ir kwaye yenza ukuba kube lula ukufunda kunezenzi ezithile zesiFrentshi.
Isebenzisa enye yeendlela eziqhelekileyo zokudibanisa, ngoko ukuba ufunde amagama afana nokugcwalisa (ukuzalisa) , sele uqala ukuqala.
Isinyathelo sokuqala siyiqonda isenzi sesenzi, esiyi- reun- . Emva koko, usebenzisa ishati, unokufunda oko kukuphela kokubongeza okuhambelana nesigama sesigxina kunye nexesha elifunekayo. Oku kuya kukunceda ufunde iifom eziphambili zengqondo ebonisa, esetyenziswa rhoqo.
Ngokomzekelo, i- réunis ithetha ukuthi " Ndiyaphinda ndihlangane " kwaye siye saphinda sichaze ukuba " sihlangene ."
reunis reunirai reunissais
reunis reuniras reunissais
ukudibanisa reunira idibanisa
reunissons reunirons i-reunissions
hlaziya reunirez reunissiez
ukudibanisa reuniront bahlangene
Ukuthatha Inxaxheba Kwamanje YeReunir
Njengokuba kunesenzi-esenziweyo rhoqo, i-ending- remaining is added to the stem ukuvelisa okwangoku inxaxheba . Oku kubangela igama elihlanganisayo .
Réunir kwixesha elidlulileyo leComplete
NgesiFrentshi, i- compé passé yixesha elidlulileyo lexesha.
Kudinga isenzi esincedisayo kunye nexesha elidlulileyo le nxaxheba .
Ukuze uyifake, qalisa ngokudibanisa i- ava kwixesha langoku ngokubhekiselele kwisifundo, uze ungeze iqela elidlulileyo. Ngokomzekelo, oku kusishiya ne- re réuni ye " Ndahlangana kwakhona" kwaye sihlangene " sihlangene ."
Ukugqithisa okulula ngakumbi kweReunir
Iimbambano ezimbalwa zokubambisana kufuneka zijikeleze uluhlu lwakho olubalulekileyo lwe- reunir .
Ungasebenzisa ukuzithobela xa isenzo sokuhlanganiswa singaqinisekanga okanye sinemeko xa kuxhomekeke kwenye into. I-passé elula kunye nokungafezeki kokungafezeki kubini iifom zobhaliso, ngoko uza kufumana ezi ziFrentshi ezibhaliweyo.
reunisse reunirais reunis reunisse
reunisses reunirais reunis reunisses
reunisse reunirait ukudibanisa reunit
i-reunissions ii-réunirions reunîmes i-reunissions
reunissiez reuniriez reunîtes reunissiez
ukudibanisa ukubuyisana reunirent ukudibanisa
Imfuneko yesiFrentshi isetyenziselwa ukuthetha ngokuthe ngqo nangokuthe rhoqo. Umgaqo obaluleke kakhulu omele ukwazi ukuba isigama sesigxina asiyimfuneko kule meko. Unganciphisa u- réunis ukuya kwi- reunis .
Iimpawu eziqhelekileyo zesiFrentshi
Intetho ye-Majime eJapan
Amagama aseSpeyin ngaphandle kweLizwi elilodwa leNgesi
Iingqungquthela eziqhelekileyo zesiNgesi-German
Le nto ayibi
11 Iintetho zesiGrike "ezinkulu" ngesiFrentshi
Funda iinyanga, amaxesha, iintsuku, kunye nemihla yesiJamani
Indlela yokuLawula ibhola leCue: Elinye iMicrosoft Stance Move
Amabutho ase-Asia awaziwa kakhulu aguqule imbali
Umsebenzi wesikolo wasekhaya: Buza imibuzo uze ufumane izimpendulo kwi-intanethi
Iinkolelo Zengqondo Echazwayo
I-Italian Stallion: Imbali kaFerrari
Inkqubo yoBheno iNqanaba leNkundla yoLwaphulo-mthetho
Ulandelelwano lweeTenti zesiGrike
Yintoni i-Political Extremist?
Udidi kunye noMsunguli
UBy Dy Dy's 'Iqhwithi': Ibali Elandelwa Ngomculo
Yivani na apha
Umdlalo (i-rhetoric kunye nobunjwa)